Ntinye aka na Naturepoly guzobere Luna banyere PLA Straw
site ha na 21-03-08
Q1: Gịnị bụ PLA? Luna: PLA na-anọchite anya Polylactic Acid. A na-eme ya, n'okpuru ọnọdụ ndị a na-achịkwa site na osisi fermented dị ka stachi ọka, akpu, okpete na pulp pulp. Ọ bụ uzo ma sie ike. Q2: Ndi ahia gi? Luna: Ee. Anyị na-enye ahaziri iche ...
Ego Ole Ka Anyị “Na-eri” Kwa ?bọchị?
Taa ụwa a na-ahụ nrụrụ plastik siri ike karịa oge ọ bụla. Na elu ugwu nke Everest, 3,900 mita n'okpuru South China Oké Osimiri, n'etiti Arctic ice caps na ọbụna na ala nke Mariana Trench plastic mmetọ dị n'ebe niile. Na oge nke ngwa-cons ...
1. Kedu ihe bụ plastik na-emebi emebi? Plastọ degradable bụ nnukwu echiche. Ọ bụ oge nke oge ma nwee otu ma ọ bụ karịa usoro n'okpuru ọnọdụ gburugburu ebe obibi akọwapụtara, na-ebute mgbanwe dị ukwuu na usoro kemịkal nke ihe ahụ, ọnwụ nke ụfọdụ njirimara (s ...